MOORYAAN MAGACYO BADANAA!!
Dr. Maxamed X. Siciid. Al-Jabarti.
1- MARXADDII QARAN-DUMISKA:
1990kii waxaa ka socoday gobollada waqooyi ee dalka dagaal xooggan oo ay SNM kula jirtay dawladdii M.Siyaad barre. Waxaa kale oo jiray dagaallo aan xiriir ahayn oo ay wadday SSDF oo xilligaas daciiftay. Waxaa muuqatay in M.S. Baree ay xukunkiisii ka hartay maalmo kooban. Taas waxay ku dhalisay rag qorba-joog ahaa oo ka tirsan beelaha Hawiye in ay iyaguna dhistaan Jabhada beeshooda u gaar ah si aysan uga qadin dhaxalka M. siyaad. Jabhadda waxaa dhisay sakhsiyaad aqoonyahan ah oo badankoodu ku noolaa dalka Talyaaniga. Waxaana lagu asaasay magaalada Roma 1990kii Jabhadda USC oo ay iska leedahay hal beel oo qur ah una adeegaysa danaha beeshaas.
lama inkiri karo in ay jireen qaar badan oo USC ah oo Aaminsanaa fikradihii odadyaashii bilaabay ururka laakiin waxaa qaaday daadkii aqlabiyadda. Hoggaankii iyo awooddiina waxay ku wareegtay dadkaan wax-ma-garatada ah ee ku caan baxay magaca MOORYAANTA
Magaaladii caasimadda ahayd waxaa loo qaybiyay xaafadaheedii Jilibyada Beesha Hawiye. Somali-wayn tii kale waxaa laga nadiifay magalada. Hantidii guud iyo tii gaar ahaaneedba waa lakala buubay. Nin kasta waxii gacantiiso gaatay ayuu magaciisa ku qortay :HEBEL BAA XORAYSTAY.....iwm. Xooggaan Mooryaanta waxaa la taxaalufahay ganacsato cusubb oo ka maalaysatay bililaqadii hantida dalka iyo ganacsigii xaaraanta ahaa ee burburka. Waxayna ku qotomiyeen siyaasaddooda ka hor-tagga wax kasta oo keeni kara Dawladd xataa hadday tahay Dawladd-hoose oo loo dhiso magaalada Muqdisho ama magaalo kale oo hoos timaada beelaha Hawiye.
Muqdisho waxay noqotay goobo-dagaal oo ay isku hardiyayaan jilibyo iyo lifooyin kala duwan oo isku beel ah iyo JINNI iyo JAAN aan tilmaanba lahayn oo idilkood ku hardamaya gacan ku haynta ISBAAROOYINKA. Goob walba waxaa ka taliya nin kaapo-mooryaan ah oo awooddii kala wereegay siyaasiyiintii jilibkiisa. Nimaankaan oo ku caan baxay magaca: QAB-QABLAYAASHA-DAGAALKA.
Shir-waynihii Carta waxa Cahdi-Qarameedka lagu qeexay in Magaalada Baydhabo noqoto Casimadda KMG ah ee dalka. Waxaase ka leexday Ganacsatadii Muqdisho oo qabay fikadda dawladd-diidka ah. Muqdisho markii la tegay madaxdii dawladda wixii reer USC ahaa nin kastaa wuxuu dabada la galay mooryaantiisii. Madaxdii ka soo jeedday beelaha ka baxan USCda kuwaas oo loogu magacaabay beelaha aan hubaysnayn waxay MAGAN u noqdeen beelaha iyo jilibyada USCda ee ay ku leeyihiin qaraabo, saaxiibbo ama af-garasho.
Dr. Cabdi-qaasin wuxuu la galay beelaha Hawiye ( Qabqablayaasha-Ganacsatada-Maxkamadaha ) wada-xaajoodyo guud oo heer Hawiye ah iyo kuwo Gaar-gaar ah oo heer jilib iyo Jifo ah in ay taageeraan Dawladdiisa. Dadaalladaas oo dhan wuu ku hogoobay markii si caddaan ah loogu sheegay in aysan DOONAYNIN DAWLADDIISA IYO MID KALA toona.
Maxkamadahu waxay ka marnaayeen aragti-siyaasadeed nooc ay ahaataba gudaha iyo dibadda. Waxaase ka muuqatay in aysan Somalinida Aaminsanayn iyaga oo meesha ay qaybsadaanba saarayay CALANKA MADOOBA EE SHIICADA lagu yiqiin . Waxaana meela dhawr ah lagu lagu IHAANEEY CALANKA SOMALIA. Waxay madaxdooda sare Aaminsanaayeen Afkaar aan caddayn oo muggddi ku jiro oo hadafkeedo yahay in Somalia laga sameeyo IMAARADD ISLAAM AH oo ay u simanyihiin muslimiinta caalamka oo dhan. Sidaas ayay uga sii shisheeyeen xataa mooryaanta Qaran-diid caaddiga ah oo waxay ahayeen SOMALI-DIID.
5- MARXLADDA SHAARKA-HAWIYE:
Marxaddani oo ah tii uga danbaysay oo ah ahna tan maanta lagu jiro. Waxaa Muqdisho ka wada dagaal-qaran-diid ah kuwa isku magacaabay BEELAHA HAWIYE. Waxaa is-waydiin leh : Ma kooxo cusubb oo Qarandiid ah ayaa Hawiye ka soo baxay maanta ? Mase waa haraagii Maxkamadaha? Mase duulal kale oo cir-ka-soo-dhac ah?
Jawaabto waxay ku jirtaa marxaladaha aan soo taxay ee ay Muqdisho ku sugnayd 17 kii sano ee la soo may. Waa qaybtii uga danbaysay ee dagaallada iyo coladaha Xamar ee aan macnaha lahayn. Haddaan sii qeexo waxaa dirirta waaa xooggagii wax-ma -garadka ahaa ee la wareegtay awooddii USCda 1992kii kaddibna la baxay magaca MOORYAANTA. Waa kuwii Dumiyay Qarankii Somalia xididdana u siibay. Waa kuwii ka taajiray dhaca iyo boobka hantiidii qaranka iyo tii dadka. Waa kuwii fashaliyay intii isku-day la soo maray si dalka Dawladd loogu dhiso Qaranimadii loo soo noolsa. laga soo billaabo tii Cal Mahdi ilaa tii Cabdi-qaasim.
Sannadkii hore waxay la baxeen Maxkamadu Islaami ah oo Mooryaan ayaa Cimaamado-guduudan laga simay.
Marxaladahadaas oo dhan waxay ku hawl-galaan hal mabda' oon isbeddelin oo ah in Dalku xaaladda burburka ku daa'imo. Haddaan soo koobo jawaabto waxay tahay kuwa maanta Muqdisho ka wada dagaalka Qaran-diidka ee la soo baxay koofyadda Haiwye waa runtood oo Hawiye way yihiin wayna yeen 17kaa sannadoodba.
laakiin ma aha Hawiye cusubb ee waa kuwii muddadaas dheer marba middab is-marinay. Maantana markii ay ka dhamaadeen maryihii kale waxay la soo baxeen wajigoodii RUNTA AHAYD OO AH IN AY YIHIIN MOORYAAN HAWIYE AH .
Haddaba waxaa la is-waydiinaya: HAWIYE OO DHANI MA MOORYAAN QARAN-DUMIS QARAN-DIID AH BAA??
Su'aalahaan jawaabtooda waxay noqon doontaa qormada danbe haddii Alle yiri.
Waa : Dr. Maxamed X. Siciid. Al-Jabarti.